Inkampani Isingeniso - Ningbo YH umfutholuketshezi Imishini Factory
A professional umakhi futhi umthengisi nokufakwa wokubacindezela, ferrules, amapayipi amanzi, imishini kanye hose yesifunda.
Ningbo YH umfutholuketshezi Imishini Factory lamiswa ngo umuzi omuhle, Ningbo, okuyinto idume Beilun port. YH umfutholuketshezi kuyinto imboni ezikhethekile ukuthi ukhiqiza nezinto aluka hoses iraba, hose nokufakwa, hose ferrules, umfutho ophakeme hose yesifunda, imishini crimping, njll Ngenxa umkhiqizi, YH ephikelela ekuphishekeleni izinga kangcono nge kubiza aphansi. Ngakho silawule izinto okuyinto
kufanele uthenge kusuka izinkampani ezisemthethweni steel futhi ejwayelekile kanye nqampuna umhlabeleli. Futhi siye kwenziwe ikhiqiza uhlelo ihlanganiswe ogxile izinga focus.
Njengoba umdayisi, imikhiqizo yethu akhishwa emhlabeni futhi ithengiswe kuzwelonke iminyaka engaphezu kwengu-8. Sinesibopho lokumaketha team abahlakaniphileko bahlola izimakethe ezintsha, nokuthuthukisa labo abangase babe abathengi, ukuxazulula izinkinga, futhi nokusebenzela ngokusiza amakhasimende oda kahle. Singabantu Cooperator wokuncintisana futhi banobungane futhi umgomo wethu ngoba inzuzo kithi nakuye futhi eside enhle nokubambisana.
Okunzima ukulawula izinga; Kodaba real-time; Wanelisekile emva-sales service
Thina ubheke azinabo izici ezine (impahla ukulawula ukungenisa → umugqa ukukhiqizwa ukulawula → QC isilawuli umnyango → logistic isilawuli umnyango) nokulawula izinga uhlelo ukuze uqiniseke ukuthi wonke imikhiqizo engazange ithinteke ngaphambi kokubeletha. Inqubo yethu zokukhiqiza has eziyisishiyagalombili: ukulungiselela impahla; ithuluzi lathe ukucutshungulwa; CNC umshini ukucutshungulwa; burrs futhi ukungcola nokususa; zinc Plating; izinga lokugcina kanye nobungako eliphakeme; ukupakisha futhi akhulule. Enibaziyo, sizobe zihlele ukuhlolwa
kane phakathi zokukhiqiza oyedwa oda. Imikhiqizo ka Ubukhulu kwesokudla nezimfuno ihlolwe uzobe ayifake isinyathelo esilandelayo.
Kanye ngesonto, uMnyango wethu QC uzohlola imishini CNC nezinye Equipments ukuqinisekisa umsebenzi wabo omuhle.
Indlela ephumelela kanye real-time ukweseka kubaluleke kakhulu kumakhasimende. Amakhasimende ethu ungathola yethu ithuluzi chatting ku-inthanethi (i-Skype) okuyinto amanga ezansi website. Noma imeyli nathi neminye imikhiqizo anentshisekelo, izimfuneko, noma izinkinga. Ukuze contact osheshayo, ucingo yethu itholakala amahora angu-24 ngosuku. Futhi sibuthene yonke imibuzo nezimpendulo akubonisa FAQ. Njengoba umphakeli okuthembekile, siyaqhubeka nokuxazulula izinkinga ngendlela egculisayo futhi ngendlela ayamukelayo.
Kodwa kungakhathaliseki ukuthi ngokuqinile silawule izinga nendlela efanele sikhonza, kungekho imikhiqizo 100% iphelele. Ngakho sinikeza emva-sales service ezingasetshenziswa isiqinisekiso imikhiqizo yethu izinga kanye nenkampani ezisekelwe kunembeza esiyikho. Silwela ekulaleleni kwawo ngezansi imigomo emithathu:
Ukukhiqizwa Ifilosofi yethu:
→ izinga Better; Ukuqamba nokuvikelwa Environmental
Ukumaketha umqondo wethu:
→ izinzuzo Mutual; Ukwanelisa okufunwa emakethe; Ukunikeza arcade imikhiqizo nesevisi kumakhasimende
Inkonzo yethu wumgomo:
→ beqa isifiso sakho; Ukuze inkampani kunokwethenjelwa futhi anyuswe
Carbon Steel umfutholuketshezi Hose nokufaka, Hydraulic Hose End Fittings, Hose Crimping Machine , umfutholuketshezi Hose lokulinganisa , Carbon Steel umfutholuketshezi nokufaka , Metric Pex Pipe Brass nokufaka , Zonke Imikhiqizo